Ady amin'ny halatr'omby :: Mpimasy roa voasambotra • AoRaha
Lehilahy mpimasy roa voalaza fa mpanao ody bala no tra-tehaky ny zandary any Farafangana sy Andilamena, tamin’ny faran’ny herinandro lasa teo. Samy naiditra amponja avokoa izy ireo. Nodorana ireo ody gasy marobe sy moara tratra tao an-tranony. Mbola mikaroka an’ireo dahalo naka fanafody sy mampiasa azy roa lahy ireo ny zandary any an-toerana.
Niainga tamin’ny angom-baovao avy amin’olona tsotra no niafara tamin’izao fisamborana ireo mpimasy izao, araka ny fitantaran’ireo zandary. « Mpamatsy fanafody gasy dahalo maro izy ireo. Efa niverimberina matetika ny anaran’izy ireo isaky ny misy olon-dratsy fotorana, saingy tsy mety tratra hatramin’izay. Rehefa nisy nanoro ny trano ipetrahan’izy roa lahy no niroso tamin’ny fisamborana izahay », hoy ireo mpitandro filaminana.
Tsikaritra ho manova fomba fiady amin’ny hamongorana ny asan-dahalo ireo mpitandro filaminana any ambanivohitra. Misy ny fanangonam-baovao ataon’izy ireo amin’ny fikarohana ireo mpimasy sy mpanao ody gasy mifandray amin’ireo dahalo mpangalatr’omby.
Asan-jiolahy :: Misesisesy ny fanafihana mitam-basy any Tsiroanomandidy